ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Golden Visa မှနေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို -
အကောင်းဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားများထိုင်းနိုင်ငံရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များ၏နေထိုင်မှုသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှ Residency၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှ Residency၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒုတိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှစ်မျိုး၊ , ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ရွှေဗီဇာ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
သင်၏အထောက်အပံ့ဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 15,000
အနောက်ဘက်နှင့်အနောက်မြောက်တွင်မြန်မာ (မြန်မာ)၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင်ကပ္ပလီပင်လယ်၊ အရှေ့နှင့်အရှေ့မြောက်တွင်လာအိုနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင်ကမ္ဘောဒီးယား၊ တောင်ဘက်တွင်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ (တောင်ဘက်လမ်းကြောင်း) ရှိသည်။ တရုတ်ပင်လယ်) နှင့်မလေးရှားတို့က။
ထိုင်းနိုင်ငံသည်513,120ရိယာ ၅၁၀၁၁၂၀ ကီလိုမီတာကျယ်ဝန်းပြီးနိုင်ငံသည်စပိန်နိုင်ငံထက်အနည်းငယ်မျှသာကြီးမားသည်သို့မဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ ယ်မင်နယ်မြေ၏နှစ်ဆကျော်မျှသာရှိသည်။
ထိုင်းသည်အရှေ့တောင်အာရှရှိအငြိမ်းစားယူသူများနှင့်အငြိမ်းစားယူသူများအတွက်အဓိကအကျဆုံးကန့်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ပူပြင်း။ မြို့ပြမြို့တော်မြို့တော်၊ Chiang Mai မြောက်ပိုင်း Lanna မြို့တွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေနိုင်ငံကိုမြေပုံပေါ်တွင်တင်ထားသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုနှင့်နီးသည်ဖြစ်စေထိုင်းသည်စားပွဲသို့ခေါ်ဆောင်စရာများစွာရှိသည်။ လူတိုင်း။
အချို့သူတို့သည်တစ်နှစ်လုံးအပူနှင့်စိုထိုင်းဆကိုအလွန်နှစ်သက်ပြီးစိုစွတ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းအချို့ကမူမြောက်ပိုင်းလေထု၏အေးသောနေ့မှထွက်ခွာသွားသည့်အခါ၌၎င်းကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှုတ်ဆက်ကြသည်။ လူနေမှုအနည်းဆုံးအားထုတ်မှု၊ ထိပ်တန်းဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင့်တင့်မျှတသောကုန်ကျစရိတ်နှင့် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုဆောင်းခြင်းတို့ဖြင့်အပြုံးများမြေ၏ဆွဲဆောင်ရန်ခက်ခဲသည်။
လေယာဉ်အမျိုးမျိုးသည်ယူအက်စ်နှင့်ကနေဒါရှိမြို့ပြဒေသများသို့နေ့စဉ်ခရီးများသွားကြသည်၊ အခြားအဓိကကျသောခြုံငုံကန့်ကွက်မှုများကဲ့သို့ပင်။ အရှေ့တောင်အာရှ၏အဓိကနေရာတွင်တည်ရှိပြီးထိုင်းသည်အခြားနီးကပ်သောနိုင်ငံများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆိုယခင် pats များကိုဗဟိုမှခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံ၏အဆုံးတစ်ခုမှတစ်ခုသို့အမှန်တကယ်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
အချို့သည်မြောက်ဘက်ချင်းမိုင်မြို့သို့သွားပြီးတစ်နှစ်တာ၏အများစုအတွက်ညနေခင်းမှာအေးသည်။ အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံသည်အေးသောရာသီဥတုကာလတစ်လျှောက်လုံးနွေးထွေးမှုကိုဖြေလျော့ပေးနေဆဲဖြစ်သော်လည်းထိုနိုင်ငံ၏အပူချိန်သည်ည ၆၀ F သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသွားနိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်ဟောင်းများသည်ကဖေးများ၊ လက်မှုအနုပညာပြပွဲများ၊ သမားရိုးကျအနုပညာလက်ရာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပွင့်လင်းသောစျေးကွက်အမျိုးမျိုးကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖွံဖြိုးတိုးတက်သော espresso၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အခန်းရှင်းလင်းရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုများပြားလာရန်ခက်ခဲသော်လည်းဘာမှမဖြစ်။
ဘန်ကောက်သည်ကြီးမားသောမြို့ပြ၏မငြိမ်မသက်နှင့်စွမ်းအင်ကိုမှီခိုနေသူများကိုဆွဲဆောင်သည်။ မြို့တော်သည်၎င်း၏တက်ကြွသောလမ်းဘေးဘဝ၊ လူမှုရေးမှတ်တိုင်များ၊ အားမာန်ပြည့်ဝသောညဘက်များနှင့်အစာစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအံ့သြဖွယ်ရာပြပွဲများကြောင့်ထင်ရှားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများထက်ပိုမိုအကုန်အကျသော်လည်း, ဘဏ္financialာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဌန်ကိုက်ညီဖို့မြေယာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်သေးသည်။
လူသိများသောကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများဥပမာ၊ ဖူးခက်နှင့်ပတ္တရားတို့သည်ပင်လယ်ကမ်းခြေ၌ထိုစိတ်ကူးယဉ်အနားယူမှုကိုရှာဖွေနေသည့်လူအမြောက်အများကိုဆွဲဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤနယ်မြေများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်လက်ရှိအချိန်တွင်စျေးကွက်အလွန်အကျွံရောင်းဝယ်နေသော်လည်း၊ ကျော်ကြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများမှကီလိုမီတာ ၂ ခုရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကပိုမိုရိုးရှင်းသောထိုင်းနိုင်ငံကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုင်းကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းမြို့ဖြစ်သောဟွာဟင်းသည်ဘန်ကောက်တောင်ဘက်တွင်နာရီအနည်းငယ်မျှသာကားမောင်း။ ၎င်း၏လူကြိုက်များသောမိတ်ဖက်များနှင့်ဆန့်ကျင်။ အမှန်တကယ်ဆုတ်ခွာနေဆဲဖြစ်သည်။ အမှန်မှာကမ်းရိုးတန်းနှင့်နီးကပ်နေလျှင်ပင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအနည်းငယ်သည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းအနည်းဆုံးဖြစ်ရန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားနိုင်သည်။ လူနေမှုစရိတ်သည်ကန့်သတ်ချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အခုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာစျေးအသက်သာဆုံးပါ။
ဘန်ကောက်သည် ပို၍ စျေးကြီးသည်။ ဤနေရာတွင်နိုင်ငံခြားသားများသည်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းတို့ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏မြို့တော်သည်ကြီးမားသောစျေးဝယ်စင်တာများ၊ ရွေးချယ်စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ ပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများရှိသည်။ သင်၏ငွေကိုဖြတ်သန်းရန်အစက်အပြောက်များစွာရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောဘဝလမ်းစဉ်ရရှိရန်မည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမဆို ၄၀၀၀၀ မှ ၆၀၀၀၀ အထိသင်သုံးစွဲရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သင်စီးပွားရေးချွေတာလျှင်၎င်းအချက်သည်သိသာထင်ရှားသည့်အတွက်လျော့နည်းစွာအသုံးချနိုင်သည်။ သီတင်းပတ်၏အဆုံးတိုင်းကိုမထွက်သွားရန်၊ အနီးအနားရှိအရက်ဆိုင်များတွင်သာစားရန်၊ အဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအရာများကိုမသုံးစွဲရန်နှင့်သင်လစဉ်လတိုင်းဘတ် ၃၀၀၀၀ တွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြေခံအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အချိန်ယူလုပ်ဆောင်သည်
အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပြီးနောက်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ELITE အစီအစဉ်သည်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုထားသောအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အားကစား ၀ န်ကြီးဌာနမှကြီးကြပ်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့် Thailand Privilege Card Company Limited (TPC) မှဗီဇာထုတ်ပေးသည်။
နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာအတွက်မူထိုင်းသည်ရွေးချယ်မှုသုံးခုရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိပုံမှန်သွားလာနေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်နေထိုင်လိုသောနိုင်ငံတကာ HNW နိုင်ငံသားများအတွက်အစီအစဉ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိအထက်တန်းလွှာလူနေမှုအစီအစဉ်သည်လျှောက်ထားသူများအားထိုင်းနိုင်ငံတွင်အနှစ် ၂၀ ကျော်နေထိုင်ခွင့်၊ အထူးအခွင့်အရေးများနှင့် VIP ခံစားခွင့်များကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိအထက်တန်းလွှာနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရရှိရန်နိုင်ငံခြားသားများသည်ထိုင်းအထက်တန်းလွှာနှင့်ပူးပေါင်းကာထိုင်းအထူးအခွင့်အရေးကုမ္ပဏီကန့်သတ်ထားသည့်သီးသန့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ (TPC)
ဒီအစီအစဉ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွင်းမှာကာလရှည်ကြာစွာနေထိုင်လိုပြီး၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့အကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့အခွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရယူလိုတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။
ထိုင်းအထက်တန်းလွှာလူနေအိမ်ရာအစီအစဉ်တွင်ရွေးချယ်စရာ ၇ ခုရှိသည်။
Elite Ultimate Privilege သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြစ်ပြီးတစ်ကြိမ်ငှားရမ်းခအတွက်ဒေါ်လာ ၆၀,၀၀၀ နှင့်နှစ်စဉ်ကြေးဒေါ်လာ ၆၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်တွင်သီးသန့် VIP အမြန်ဆုံးလေဆိပ်နှင့်တည်းခိုခန်းဝင်ခွင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အကန့်အသတ်မရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေတိုလေဆိပ်လွှဲပြောင်းမှုများ၊ အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ဂေါက်သီး hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
Elite အခွင့်ထူးရရှိမှုသည်a10 နှစ် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသည်မိသားစုလျှောက်လွှာများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အဓိကလျှောက်ထားသူအတွက်တစ်ကြိမ်ပေးရသောပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိပြီးမှီခိုသူတစ် ဦး လျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၅၀၀ ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ကြေးမရှိပါဘူး အထုပ်ထဲတွင် VIP Express လေဆိပ်အဆောက်အအုံများ၊ ခရီးသွားလာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများပါဝင်သည်။
Elite လွယ်ကူသော Access
Elite Easy Access သည်ငါးနှစ်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသားများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးသမားများကိုပုံမှန်အချိန်နှင့်ပုံမှန်ကာလအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်စေသည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်တစ်ကြိမ်သာဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ကျသင့်သောငွေပေးချေမှုလိုအပ်ပြီးနှစ်စဉ်ကြေးလည်းမလိုအပ်ပါ။ ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိ Elite Easy Access နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို Elite Ultimate Privilege option သို့အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။
APPLICATION သို့ PROCESS
TPC သည်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဗီဇာကိုတစ်လမပြည့်မီထုတ်ပေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံရှိသတ်မှတ်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တစ်ခုမှရရှိနိုင်သည်။ လျာထားခြင်းမရှိလျှင်လျှောက်ထားသူများသည်ရွေးချယ်ထားသည့်အထုပ်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီလိုလားသမျှကာလပတ်လုံးထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်နိုင်သည်။ လျှောက်ထားသူများသည် အကယ်၍ သူတို့သည်တိုင်းပြည်အတွင်းရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ဆက်တိုက်နေမည်ဆိုလျှင် TPC သို့အကြောင်းကြားရမည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိအထက်တန်းလွှာလူနေအိမ်ရာအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ဦး တည်ခြင်းမရှိပါ။ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်သည်လျှောက်ထားသူသည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံးသုံးနှစ်ထိုင်းဗီဇာရှိမှသာရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁၀ နှစ်ကြာထိုင်းနိုင်ငံတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိပြီးနောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များမှပြုလုပ်သည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရှိဖောက်သည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုထိုင်းနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ထောက်ခံမှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၃၇ နိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ထိုင်းနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှ Golden Visa ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်လည်းကူညီသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်အခြားအရာများစွာပါဝင်သည်။ ၎င်းမှာငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်များစွာရှိသည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံအဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်၊ ထိုင်းအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်သူများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှတတ်နိုင်သော Residency၊
ထိုင်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့နိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာဖြင့်သွားနိုင်သည်။
နိုင်ငံသား ၃၇ နိုင်ငံသို့ထိုင်းနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ထိုင်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှစီးပွားရေး ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိနိုင်ငံ ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ထိုင်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ကောင်းမွန်သောအမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်ကြည့်လျှင်ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်သူတို့နေထိုင်မှုအတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များနှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များနှင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည့်အကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြားဆက်သွယ်မှုရှိသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှနေထိုင်ခွင့်
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ဖြင့်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
မည်သည့်အကြံပေးချက်များကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ထိုင်းသို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်လိမ့်မည်
ဖောက်သည်များအားထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး Due Diligence ကိုလုပ်ဆောင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ Residency နှင့်အတူထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းရန်အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်ထောက်ခံခြင်းထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။ Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့်ဖြည့်သည့်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုသည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့် Residency အတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးပါကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များထံကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
Duration: 30 ရက်ပတ်လုံး
သင်၏ထိုင်းနိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံမှလက်နက်များနှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များအားဖြင့်ဖြစ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ဖြစ်စေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းမှစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများ ထိုင်းနိုင်ငံရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ကုန်သွယ်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အထောက်အပံ့မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ထုိင္းႏုိင္ငံ ထိုင်းနိုင်ငံရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရှေ့ရပျ ထိုင်းနိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ထိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏ KYC အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းထိုင်းအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များအရနိုင်ငံတကာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ထိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအောင်မြင်မှုနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုပေးသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့သောထိုင်းနိုင်ငံသို့ dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများနှင့်ထိုင်းမှတရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ဖောက်သည်များအားကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသော Residency ။
သင်၏ထိုင်းနိုင်ငံသို့သင်နေထိုင်ခွင့်မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးထိုင်းနိုင်ငံအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဖောက်သည်များအားကူညီခြင်း။
အကယ်၍ သင်၏ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်ပါကကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနိုင်ငံပေါင်း ၃၆ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစီအစဉ်ခနှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်တွက်ချက်ရန်မိသားစု ၀ င်များနှင့် ၄ င်းတို့၏သက်တမ်းအပါအ ၀ င်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်အခြားကုန်ကျမှုများပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေဖြင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်မည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
Residency မှလွဲ၍ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုထိုင်းနိုင်ငံရှိအခြားအတိုင်ပင်ခံများကပံ့ပိုးပေးသောထီးတစ်ချောင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိုင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
မိသားစုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ (သို့) Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်အကောင့်များနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကူညီနိုင်သည်။
Inca သင်အဘို့, ထိုင်းနိုင်ငံမှာအတိုင်ပင်ခံလိုအပ်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ် ထိုင်းနိုင်ငံရှိရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် မင်းစီစဉ်မယ်ဆိုရင်ထိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ချက်ချင်းစတင်နိုင်ရန်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ထိုင်းနိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေရာချထားပါ အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိဘဏ္Plာရေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
စာရင်းအင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်း အများကြီးပို.
Virtual Office Address ထိုင်းနိုင်ငံ
Residency ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်၊ အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ထုိင္းႏုိင္ငံ.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေးသည်
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Web Design
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ App Development
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Software Development
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency မှရှေ့နေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်တရားဝင် Residency ကိုပံ့ပိုးပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုင်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ထိုင်းတစ် ဦး ချင်းစီနှင့် ၄ င်းတို့မိသားစုများအတွက်ဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားတရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရှေ့နေသည်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင့်အားသင်၏ရှေ့နေအားတရား ၀ င်တရားဝင်ဖြစ်သင့်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံပိုင်နက်တွင်အသုံးပြုရန်။ သင်၏နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အက်ပယ်နယ်လ်သို့မဟုတ်ထိုင်းကောင်စစ်ဝန်ရုံးကတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခြင်း။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှထောက်ပံ့ခြင်း ထိုင်းနိုင်ငံ။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများ၏နေထိုင်ခွင့် | ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများ၏နေထိုင်မှု
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုထိုင်းနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများမှနိုင်ငံသားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားခြင်း။ အကောင်းဆုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ | ထိုင်းနိုင်ငံရှိလူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာရှေ့နေများ | ထိုင်းနိုင်ငံရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံရှိစျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးများ စျေးသက်သက်သာသာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအိမ်ရာမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အကြံပေးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ | ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ထိုင်းနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ရွှေဗီဇာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတဆင့်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ဖြစ်သည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ထိုင်းမှအေးဂျင့်များသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency ကိုထောက်ပံ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြေးကိုသာပေးသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှသာအာရှမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အာဖရိကမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဥရောပမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ တောင်အမေရိကမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ မလေးရှားမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှထိုင်းမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ Residency၊ သီရိလင်္ကာမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ နီပေါမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency၊ အိန္ဒိယမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှ Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှထိုင်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency တွင်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များ ဦး စီးဌာန
နိုင်ငံခြားရေး ဦး စီးဌာန
ဖိလစ်ပိုင်လေထု၊ ဘူမိရူပနှင့်နက္ခတ္တဗေဒ ၀ န်ဆောင်မှုများစီမံခန့်ခွဲမှု
လူမှုဝန်ထမ်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦး စီးဌာန
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဦး စီးဌာန
လယ်ယာမြေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဦး စီးဌာန
ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှု ဦး စီးဌာန
ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်အဝေးပြေး ဦး စီးဌာန
အလုပ်သမားနှင့်အလုပ် ဦး စီးဌာန
link ကိုမှ ထိုင်းနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ထိုင်းနိုင်ငံရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်